Asingamire kuTel Aviv kubva kuDubai kuEmirates, kubva kuAud Dhabi paEtihad kunoita kuti Turkish Airlines itye
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Asingamire kuTel Aviv kubva kuDubai kuEmirates, kubva kuAud Dhabi paEtihad kunoita kuti Turkish Airlines itye
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa Turkey News • Kuputsa UAE Nhau • nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Chibvumirano cherunyararo chakaitika pakati peIsrael neUnited Arab Emirates chinomiririra ingangoita shanduko yekufamba nendege nemari yekudyara mudunhu iri, nyanzvi dzekushanya dzinotenda.
Nepo ruzivo rwechibvumirano ichi ruchiri kunyorerwa, vashanyi veEmirati vatotanga kusvika kune vamwe vavo veIsrael kuti vagadzirire kukurudzira kune vashanyi iyo inotarisirwa kuburitsa. Mark Feldman, CEO weZiontours muJerusalem, akaudza The Media Line kuti akatotambira chikumbiro chakadai kubva kune anoshanda muDubai.
“Emirates vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe asi miriyoni imwe chete vagari venyika; vamwe vese vashandi vekunze uko, ”akadaro Feldman. “Pane 9 miriyoni achauya pano here? Vachave vachiuya kuzomabhizimusi. "Ndiko kubatana kwedu uye ndiko kuchafamba nzendo huru."
Kunze kwekuwedzera kwekufamba, kusvika kweEUE-based Etihad Airways uye vatakuri veEmirates kuchaunza chinetso chikuru kuEl Al neTurkey Airlines, iyo yakatonga musika wekufamba weIsrael, akadaro Feldman.
n rimwe divi reiyo equation equation, Feldman akataura kuti akange atoona kufarira kwakanyanya kubva kuIsrael vachishuva kushanyira nyika yeGulf, kunyangwe hosha yeCOVID-19 iri kuzara zvizere uye pari zvino pasati pava nendege dzakananga.
"VaIsrael, zvese zvebhizinesi uye zvekuzorora, vanoda kuongorora nzvimbo nyowani," akatsanangura. "Vangu vanhu vekutandara vatove vachindibata vasingamire vachibvunza, 'Ko kuzotenga ikoko?'
"Zvivakwa zviripo zvinoshamisa, mahotera ari epasi rose, asi paine imwe tsika iyo vanhu vekuIsrael yavanofanira kunzwisisa," akaenderera mberi, achiwedzera kuti zvinotora mwedzi yakati wandei kufamba pakati peDubai, Abu Dhabi, neIsrael. kunyatsobva pasi.
NeChina, Israel neUAE vakazivisa kuumbwa kwehukama hwakazara hwezvematongerwo enyika, muchibvumirano chakakwenenzverwa neUnited States, chimwe chaida kuti Israel isunungure zvirongwa zvekuwedzera zveWest Bank. Iyo UAE ndiyo nyika yekutanga yeGulf kusimbisa zvisungo zviri pamutemo nenyika yechiJuda.
Mune chirevo chakabatana, iyo US, Israel neUAE dzakarumbidza budiriro iyi se "chipupuriro chehukama hwakasimba uye chiono chevatungamiriri vatatu [Mutungamiri Donald Trump, Prime Minister Binyamin Netanyahu, naSheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan] uye hushingi hwe United Arab Emirates neIsrael kuronga nzira itsva ichavhura mukana wakakura mudunhu iri. "
Sechikamu chemabasa ekugadzirisa zvinhu, vamiririri vanobva kuIsrael neUAE vanotarisirwa kusangana mumavhiki anotevera vonyora zvibvumirano zvakati wandei. Mumwe mukuru wemuIsrael uyo akakumbira kuramba asingazivikanwe akaudza The Media Line kuti kudhindwa kwakanaka kwechibvumirano ichi kuchiri kubviswa uye kuti rumwe ruzivo nezve mafambiro uye kushanya zvichawanikwa munguva pfupi iri kutevera.
Zvichakadaro Ministry yeIsrael Yezvekushanya ine tarisiro yekuti danho iri richava rubatso rwekushanya pakati penyika mbiri idzi kana dambudziko rekoronavirus rapera.
"Kushanya kwenyika mbiri idzi kuchasanganisira, pakati pevamwe, rwendo rwechiMuslim kunzvimbo dzeIsrael dzitsvene dzevaMuslim, uye maIsrael anoshanya kuUAE, kusanganisira kutora chikamu muExppo Exhibition yepasi rose yakarongerwa kuitirwa muDubai," hushumiro hune hukama neMedia Line. mune chirevo chakanyorwa, kutaura nezveWorld Expo iyo Dubai yaitarisirwa kuitirwa muna Gumiguru 2020 asi iyo yakamisikidzwa kuenda ku2021 nekuda kwekupararira kwe COVID-19.
"Zvinoenderana nenhamba dzevashanyi vanouya vanoshanya kuIsrael mumakore achangopfuura, zvinyorwa zvakatyorwa muhuwandu hwevashanyi kuIsrael vanobva kunyika dzeArabhu neMuslim, kusanganisira idzo dzinochengetedza uye idzo dzisingachengetedze hukama neIsrael," chirevo chakaverengwa.
Semamwe mativi epasi, indasitiri yekushanya yeIsrael yatora chakakura kubva mudenda, nemakumi ezviuru muchikamu ichi chakadzingwa basa kubva pakati paKurume. Anopfuura makumi mana muzana emahotera munyika yose anoramba akavharwa, zvichangoburwa manhamba e Ministry Ministry.
Nekuda kwekudzikisira kurohwa kwemari, neSvondo kanzuru yeIsrael yakabvumidza NIS mamirioni mazana matatu ($ mamirioni makumi masere nemazana masere) yekubatsira emahotera anovavarira kuachengetedza. Zvivakwa zvehotera zvichave zvinokodzera kupihwa mari zvinoenderana nekuti vakuvara zvakadii nekuvharwa kwedenga reIsrael uye kurambidzwa kunopinda kwevamwe vekunze. Iwo ma grants anozogoverwa muna Chikumi 300-Chivabvu 88.
Vashanyi vekuIsrael, avo vari kunetsekanawo nekudonha kwehupfumi kwedambudziko repasirese, vanonyanya kuda kuwana mari pazvibvumirano zvinotangisa neEmiratis. Vazhinji vanoona chivimbiso chekureruka uye kwakachipa kwekufamba nendege mudunhu iri zvakanyanya kuvimbisa.
"Izvi zvinonyanya kukosha kubva pakuona kwekushanya nekuda kwendege dzeUAE," Mushi Vered, CEO weVered Hasharon Travel Group, akaudza The Media Line. "Tine mahofisi muPhilippines neThailand, nezvimwewo, saka izvi zvinoreva kuti vese vekuMabvazuva vasvika padyo nesu [zvekufamba-famba] nemaawa matatu nekuda kwekugona uku kubhururuka pamusoro peEmirates."
Kubhururuka kuenda nekudzoka kuIsrael kusvika parizvino kwakarambidzwa kupinda muAEE airspace uye nekudaro vaive vamanikidzwa kuita nguva dzinotora nguva kusvika kunzvimbo dziri kuFar East.
SaFeldman, Vered anotendawo kuti rubatsiro rwekutanga rwekuuya kwekushanya kubva kuGulf nyika kunouya nemukana wemikana mitsva yebhizinesi, kunyanya mubazi repamusoro-soro.
"Ini ndinofunga aya ndiwo mashoko akanaka kwatiri tese," akasimbisa, achiwedzera kuti kambani yake yakavharwa kwekanguva nekuda kwedenda iri. "Tatova nezvirongwa zve [zvekushanya] zvevaMuslim, asi Emirates inoda imwe nzira nekuti ndivo vepamusoro-soro."
Vamwe vashanyi vekushanya, avo vaive kusvika parizvino vasina kupa marwendo muArabic nekuda kwekushomeka kwekuda, vakaratidzawo kufarira pamusoro pebudiriro.
"Tichakwanisa kutambira zvikumbiro zvekushanya kwakazvimirira muchiArabic kuratidza nyika," Asaf Ben Ari, mutevedzeri wemukuru weBein Harim Tourism Services, akaudza The Media Line. "Chero basa rekushanya rakadai sekuchinjisa uye zviitiko muIsrael, Bein Harim angave anoda kuteedzera nekushandira pamwe nevamiriri veEmirati. Tine vatungamiriri vanotaura chiArabic. ”
Nekuti iyo UAE inomiririra mhando nyowani nyowani wevatengi, Ben Ari akati veIsrael vashanyi vekushanya vanofanirwa kudzidza musika kuitira kugadzira mapakeji ekufambisa anoenderana nezvinodiwa nevafambi veEmirati.
"Isu tinogamuchira chero danho rekukurudzira vanhu kuti vauye kuzofamba voona izvo Israel inopa," akadaro.
Pakupera kwezuva, zvakadaro, vamwe vemaindasitiri vari mukati vanoti kunyangwe vanhu vebhizinesi vachashanyira nyika yechiJuda kuti vaongorore mikana yekutengesa, vafambi vemuIsrael vangangoita chikamu cheshumba pakati penyika mbiri idzi.
"Zvinofadza kuti maIsrael kukwanisa kuenda ikoko uye ndine chokwadi kuti pakutanga pachave nemaphakeji mazhinji kwemazuva mashanu kana matanhatu," akadaro Feldman. "Ndinofunga kana veIsrael vakaziva kuti kunopisa sei, vanogona kusanakirwa asi kunovhura chikamu chakasiyana chose chenyika chavasati vamboenda."
"Hazvizivikanwe, mutorwa, uye [kusiyana nechinhu chero chipi zvacho] chatakamboona," akadaro.
Munyori Maya Margit, Iyo Media Line
Israeri inodzokorodza maski mvumo mazuva gumi chete mushure ...